युगसम्बाद साप्ताहिक - संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 01.29.2020, 02:29pm (GMT+5.5) Home Contact
Thursday, 05.24.2012, 10:16am (GMT+5.5)
गौतम बुद्धले आफ्ना अनुयायी भिक्षुहरूलाई “मैले भनेको भनेर मात्रै नपत्याउनु, तिमीहरू आफैंले विचार गरेर जाँचे बुझेर मात्रै पत्याउनु” भनेका थिए । (परक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यम् मद्वचो नाऽथ गौरवात्) । तर आजका नेताले आफ्ना अनुयायी कार्यकर्तालाई मात्रै होइन जनतालाई समेत आफ्ना भनाइ पत्याउन बलजफ्त गर्छन् र भड्काउँछन् पनि । नेपाली जनता पनि कति सोझा छन् भने इमानदारले भनेको बरु नपत्याउलान्, तर बेइमानले भनेको सजिलै पत्याइदिन्छन् । जनताको मनोदशा बडो एकोहोरो हुँदो रहेछ । त्यसै भएर त नेताले ठग्न पाएका छन् ।
गणतन्त्र भएपछि जसले जे चाहन्छ पाउँछ र जनताका सम्पूर्ण समस्या छूःमन्तर हुन्छन् भन्नेले भनिदिए, पत्याउनेले पत्याइदिए । समाल्न पो गाह्रो, भड्काउन कति सजिलो । तर आज सुनिंदैछ– खैः गणतन्त्रले के दियो ? नारा लगाउँदैमा हुन्छ कि, नारा सुहाउँदो काम पनि हुनुपर्छ ? कांग्रेसी समाजवादको कुन गति पारे गिरिजाले ? अब माओवादीको गणतन्त्रको हालत पनि त्यस्तै पार्ने छन् । यिनीहरूले भनेको जनता आफैंले काम हेरेर विश्वास–अविश्वास गर्नसके हुन्थ्यो, तर त्यो स्थिति नै यहाँ आएन । आउनै दिइएन ।
अधिनायकवादी चरित्र हुनेहरू पनि यहाँ प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी हुँदै गणतन्त्रवादी हुन आइपुगेका छन्, स्वघोषित गणतन्त्रवादी । राजनीतिमा र शासन सत्तामा पुग्नेहरूमा इमानदारी सबैभन्दा ठूलो गुण र योग्यता पनि हो । आफैं परिस्थितिका भेलमा नवगी विग्रेको परिस्थितिलाई समाल्ने क्षमतामै शासकीय योग्यता प्रतिविम्बित हुनुपर्ने हो, तर यहाँ राजनीति गर्नु र सत्तामा पुग्नुको अर्थ आफ्नो पालामा जनता र वादका नाममा जे जसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी पैसा कमाउनु र राष्ट्रको ढुकुटीबाट आफन्तलाई पोस्नु मात्र देखिएको छ । यो आजको दुर्भाग्य नै हो ।
यो देश विगार्ने मूल तत्व उनीहरूकै अविवेक हो, तापनि उनीहरू पश्चाताप गरेर आफूलाई सच्याउने काम नगरी विग्रेको जति दोष सबै अरुमाथि नै थोपर्छन् । आफ्नो गल्ती सुधार्ने चेतनासम्म भैदिए पनि सुधारको क्रम अघि बढ्न सक्थ्यो, तर गर्दैनन् । यथार्थ त के हो भने आफ्नो दोष नदेख्ने या दोष लुकाउन वहाना गर्ने प्रवृत्तिले आफैंलाई हानी हुन्छ भन्ने समेत बुझेनन् । आफूले पनि नगर्ने र अर्काले उछिन्छ कि भनेर बाटो छेक्न अनेक जाल प्रपञ्च गर्छुभन्दा आफैं तलपर्ने स्थितिमा पनि देखिएकै छन् । आफू त जे गर्थे गर्थे, यहाँ त देशैं डुबाउन आँटेर पो वर्वाद भयो त !
नानाथरि कृकृत्य, भ्रष्टाचार, अनाचार गर्ने अन्धविश्वासीले पाप कटनी गर्न भनेर पूजापाठ, तीर्थव्रतको स्वाङ गरेझैं देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने नेताहरूले समेत काँचोपन देखाएर जातित्वका आधारमा राज्य विभाजन गरेर प्रदेशहरूको नामाकरण गर्ने भनिरहेका छन् त्यो नै भोलि समालिनसक्नु समस्याको रुपमा देखिने स्पष्ट भैसकेको छ । प्रथमतः थोरै जनसंख्या र सानो भूभाग भएको नेपालमा संघीयताकै आवश्यकता थिएन । बरु जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार र सुविधा दिनसकेका भए हुन्थ्यो । संघीयताले त यहाँ जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने भूमिका तयार पारेर विखण्डन ल्याउने काम पो गर्दैछ । यो नेताहरूकै अपरिपक्वताको दुष्परिणाम हो । त्यसैले नेताहरूले अझै पनि सोच्नु राम्रो हुनेछ ।
जनतालाई भुलाउने र भँड्याउने गरेर शासन गर्छौं भन्नुभएन । नेताले त यथार्थ कुरा पो गर्नुपर्छ । ‘गरीबको उत्थान’ कति आकर्षक नारा छ । अहिले त ‘गरीबी निवारण मन्त्रालय’ नै बनाएका छन् क्यारे । बाहिरबाट त्यो मन्त्रालयमा प्रशस्त पैसा आएको चर्चा पनि छ । भनिन्छ– गरीबी निवारण त पक्कै भएको छ, तर कसको ? हिजोसम्मका तन्नम् नेताको कि यथार्थमै गरीब जनताको ? जवाफ यही अड्किन्छ । आज संविधानमै झगडा छ । किन छ भने नेताहरू संविधानलाई भोलि आफैंलाई खेल खेल्न सजिलो बनाउन खोज्दैछन् । सत्ता र सम्पत्ति सधैं आफ्नो कब्जामा पार्ने दाउपेच लडाउँदैछन् । त्यसैले भागवण्डाको कुरा अझै मिलिरहेको छैन । अब नमिलेको जति थाती राखेर (आ–आफ्ना अडान कायमै राख्दै) जनताका अगाडि संविधान नामको खोस्टो फाल्ने दाउमा लागेका छन् ।
नेताहरू बाहिरकै इशारामा चलेका हुनाले यहाँ नेपाली जनताका चाहना र आवश्यकता कुल्चिनु स्वाभाविक भएको छ । नेताहरूको परजीवी स्वाभाव नगएसम्म यहाँ संविधान बन्नु र नबन्नु बराबर नै छ । संविधान नमान्ने समूह पनि नेताहरूले नै तयार पारिसकेका छन् । संविधानका वहानामा जातीय युद्धको जग पनि बसालिसकेका छन् । त्यसबाट जोगिने एकमात्र उपाय जनताको एकता नै हो, त्यसैलाई छिन्नभिन्न पारिसके । इतिहासमा नेपाल बनेको र अडिन सकेको मूल तत्व नेपालीको एकत्वमा धमिरा पसालिसकेको स्थिति छ आज । नेताहरूकै साँघुरो सोचाइको परिणाम हो यो ।
‘आफैं बोक्सी आफैं धामी’को भूमिकामा रहेका नेताहरूले नै जनतामा विचलन ल्याइदिएका छन् । संघीयता र जातीय राज्यका दुष्परिणाम नेताले नै बुझ्न सकेनन् भने जनताले के बुझुन् ? विग्रेको स्थिति समाल्ने दायित्व बोकेका प्रचण्डले नै जातीय द्वन्द्व निम्त्याउन भड्काउँदैछन आन्दोलन गर भनेर । एकथरि जातिलाई अर्का जातिबिरुद्ध भड्काउने र उक्साउने कामले धार्मिक सहिष्णुता र जातीय सद्भावको अवस्थामा के कस्तो प्रभाव पर्ला ? कि नेताको जिम्मेवारी यस्तै हुन्छ । राजनेताको अनिकालै परेको हो त नेपालमा ? चारैतिर प्रश्नैप्रश्न मात्रै छन् । नेताहरूले बुद्धि पु¥याउनुपर्ने बेला यही हो । त्यसैले आ–आफ्ना पक्षका जनता उक्साएर आन्दोलनमा उतार्ने र लडाउने भिडाउने काम नेताहरले तुरुन्तै बन्द गरुन् । अन्यथा जातीय युद्धजनित बन्धुहत्यउाको लाञ्छनाले सधैं पोल्नेछ ।
माओवादी जनसेना समायोजनपछि शान्ति स्थापनाको सम्भावना ? - तारा सुवेदी (04.09.2012)
पर्वतीय राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव - यादब देवकोटा (04.03.2012)